တင်းမာမှုမြင့်တက်နေချိန် ဝါရှင်တန်တွင် အမေရိကန်နှင့်ကျုးဘားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ? - Yangon Media Group
တင်းမာမှုမြင့်တက်နေချိန် ဝါရှင်တန်တွင် အမေရိကန်နှင့်ကျုးဘားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ?
စစ်အေးခေတ်ရန်သူတော် နှစ်နိုင်ငံအကြား တင်းမာမှုများမြင့်တက်နေချိန်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်စ်တေလာဆန်သည် ကျုးဘားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘရူနို ရိုဒရီဂုဇ်နှင့် ဒေသစံတော်ချိန် အင်္ဂါနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဝါရှင်တန်မြို့တွင် ပြုလုပ်မည့် ၄င်းတို့နှစ်ဦး၏ အစည်းအဝေးသည် ဟာဗားနားရှိ အမေရိကန်သံရုံးမှ ဝန်ထမ်းများတွင် အကြားအာရုံချို့ယွင်းပြီး ဦးနှောက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်း ကဲ့သို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်ပေး တိုက်ခိုက်မှု များဖြစ် ပွားခဲ့မှုကို တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ယင်းမြို့ရှိ သံရုံးကို ပိတ်ပစ်ရန် အမေရိကန်က စဉ်းစားနေကြောင်းဝန်ကြီးတေလာဆန်က ပြောကြားခဲ့ပြီး ၁၀ ရက်အကြာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ကျူးဘားက မြောက်ဘက်ရှိ အိမ်နီး ချင်းနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပြိုပျက်သွားစေမည့် ဖြစ်ရပ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် ဝန်ကြီး ရိုဒရီဂုဇ်က ယင်းဖြစ်ရပ်ကို နိုင်ငံရေးအရပုံမဖော်ရန်နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အမေရိကန်ကိုတိုက်တွန်းထားသည်။
ကွန်မြူနစ်အစိုးရကျွန်းနိုင်ငံတွင် သမ္မတဟောင်း ဘားရက်အိုးဘားမားက သဘောတူထားခဲ့သော နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာ မှုလျှော့ချရေးသဘောတူညီချက် ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လတွင် အမေရိကန် သမ္မတထရန့် ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ကျူးဘားနိုင်ငံသို့ ခရီးသွားလာမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုတို့အပေါ် တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းများ ပိုမိုချမှတ်လာဖွယ်ရှိနေသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ တွင်ပြောကြား ခဲ့သော မိန့်ခွန်း၌ ထရန့်က ကျူးဘားကို အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် မတည်မငြိမ် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အခြေခံကျသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်သည်အထိ ကာရေဘီယမ်ကျွန်းနိုင်ငံသို့ အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးတင်ပို့မှုများကို လျှော့ပေါ့ပေး မည်မ ဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။ ကျူးဘားကလည်း ၄င်း၏ မိန့်ခွန်းမှာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဘဲ ဆိုးရွားလွန်းကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
Tags: AmericanCUBAForeigen MinisterUS
ဦးကိုနီအမှု လိုပြသက်သေ အားလုံး စစ်ဆေး ပြီးစီး
ဆိုမာလီဟိုတယ် အသေခံ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကို ကုလသမဂ္ဂ ပြစ်တင် ရှုတ်ချ
အူဘာမီယန်ကြောင့် တိုက်စစ် ပိုကောင်းလာမည်ဟု ဝင်းဂါးမျှော်လင့်